प्रत्येक युवतीले आफ्नो हुनेवाला पार्टनरमा खोज्ने ७ गुण::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
प्रत्येक युवतीले आफ्नो हुनेवाला पार्टनरमा खोज्ने ७ गुण
बुध, माघ २२, २०७६
अझ यस मामलामा यु`वतीहरु निकै सजग हुन्छन् । युवती आफ्नो पार्टनरमा निम्न ७ गुण खोज्ने गर्दछन् ।
कुनै पनि यु`वतीले आफ्नो पार्टनरमा आफ्नो पिताको छवि होस् भन्ने चाहान्छन् । पिताको छवि यस कारण कि उनिहरु आफ्नो सन्तानको निकै धेरै केयर गर्दछन् ।
उनले खाए नखाएको वा बिरामी भएको सबैमा पिताको चासो रहन्छ। तसर्थ यु`वतीले आफ्नो पार्टनरमा केयरिङ गर्ने स्वभाव भए नभएको हेर्ने गर्दछन् ।
धनी केटा युवतीको रोजाइमा पर्छ भन्ने आरोप छ । तर अधिकाशं अवस्थामा यो सत्य नै हो । किनकी अभावमा भएकासंग जीवन बिताउनु भन्दा शुरुवातमा आर्थिक सबल भएको पार्टनरलाई यु`वतीले महत्व दिन्छन् ।
यस्तोमा युवतीहरु आफ्नो पार्टनरले राम्रो जागिर खाएको होस् भन्ने चाहना राख्दछन्।राम्रो जागिर भएमा कमाई, तथा लाइफस्टाइल राम्रो हुने उनीहरुको बुझाइ रहने गरेको छ ।
अक्सर महिलालाई आफ्नो पार्टनर रोमान्टिक होस् भन्ने चाहाना हुन्छ। गम्भीर, चिन्तित वा भावुक पार्टनर यु`वतीले रुचाउँदैनन् । उनीहरु पार्टनरले घरी घरी ख्यालठट्टा गरोस्, रमाइलो माहौल बनाओस्, सरप्राइज दिओस् भन्ने चाहना हुन्छ ।
प्राय यु`वतीहरु आफ्नो पार्टनरले आफुलाई प्रशस्त समय दिउन् भन्ने चाहना राख्दछन् । कामकाजी पुरुषहरु कार्यालयको काम वा करियर बनाउने नाममा घर परिवारलाई समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् । तर यस्ता पुरुषलाई यु`वतीले खासै मन पराउँदैनन् ।
हरेक यु`वती आफ्नो पार्टनरमा समझदारीको गुण होस् भन्ने चाहान्छन् । पार्टनर समझदार भएमा मात्र आफ्नो भावना बुझ्ने उनीहरुको तर्क रहने गरेको छ । साधारण बिषयमा पनि शंका गर्ने वा किचकिच गर्ने पुरुष यु`वतीको रोजाईमा पर्दैनन् ।
यस्ता गुण भएका युवतीसँग विवाह गर्नुस्
शरीरको अंगमा भएको कोठीले निर्धारण गर्छ भाग्य
२० वर्षपछि महिलाको शरिरमा आउँछन् यी ६ परिवर्तन
महिला र पुरुषले एक अर्कालाई कसरी आकर्षित गर्ने ? केही टिप्स
अध्ययन भन्छ : केटाकेटीमा झुट बोल्नेहरु पछि हुन्छन् टाठो र बुद्धिमान !
२० देखि ४० वर्षको उमेरमा नगर्नुहोस् यी आठ काम, जीवनभर दुर्भाग्यबाट छुटकारा पाइँदैन
‘उपचार नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेज’
केअर गिभरको रुपमा जापान पुगेकी नेपाली युवतीमा कोरोना संक्रमण
मलेसियामा एक नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण, सुरक्षा सतर्कता अपनाउन दूतावासको आग्रह
UPDATE इजरायलमा कोरोनाले गर्दा ३९ जनाको मृत्यु, संक्रमित बिरामीको संख्या ७ हजार ३० पुगे
राज सागरको ‘खतराको प्रहर’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
गगनले भने- राहत पाइन्छ भन्दैमा चुल्हो निभेकाहरुप्रति अन्याय नगरौं
राष्ट्रपति भण्डारीकाे सम्बोधन : काेराेना सँगकाे लडाईमा छिट्टै मानव जातीले जित हासिल गर्ने विश्वास
ओम्नी समूहको विवादबारे बोल्यो भाटभटेनीः ‘भाडामा बसेको कम्पनीले के गर्छ त्यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौं’
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि परिणाममुखी काम गर्न कांग्रेस नेता कोइरालाको अपिल
सबै किसिमका बिरामीको उपचार गर्न मन्त्री ढकालको निर्देशन